FAALLO:Kenya u nugulaa cabsida Alshabaab, kana didsanaa Qaxootiga Soomaalida – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
FAALLO:Kenya u nugulaa cabsida Alshabaab, kana didsanaa Qaxootiga Soomaalida
Madaxda Dowladda Kenya ayaa waxaa muddooyinkan dambe ka muuqda isbarbar yaac iyo kala hadal ku aadan Xaalladda Ammaanka dalkooda, kadib, sislsilado weeraro ah oo ay Dagaalyahannadda Alshabaab ku harqiyeen qeybo ka mid ah dalkaasi.
Hadal-haynta ugu ballaaran oo ay Madaxda Sare ee Kenya beryahan ku mashquuleen ayaa ah inay ku goodiyaan warar ay xitaa Diplomaasiyiinta Calaamka si kulul u naqdiyeen.
Xeeldheerayaasha ayaa rumeysan inay Madaxda Kenya ku jahwareereen Tallaabooyinka ay kaga jawaabi karaan Weerarada Alshabaab, waxayna maciin moodeen inay xayiraad ku soo rogaan Shaqsiyaad iyo Xawaaladdo Soomaaliyeed iyo inay ku goodiyaan inay soo cayrin doonaan nus malyanka Qaxootiga Soomaalida ee dhex yurura Xerada Dhadhab oo ah Xerada ugu ballaaran Calaamka.
Go’aankaasi kuma aysan kasbanin Taageero, waxayse kala luntay mucaarado iyo Cambaarayn Caalami ah, waxaana su’aal laga keenay qaabka ay Kenya u xushmeynayso Heshiiska Calaamiga ee Dhowrista Qaxootiga oo ay horey u saxiixeen.
Hay’adda QM ugu qaabilsan Arrimaha Qaxootiga (UNHCR) ayaa gaashaanka ku dhufatay hadalkii Madaxweyne-ku-xigeenka Kenya, William Rutto ee uu ugu baaqay UNHCR in ay Qaxootiga Soomaalida dib ugu celiyaan dalkooda hooyo.
William Rutto oo isaga ah Musharax tartanka doorashadda ee soo socota la geli doona Madaxweynaha dalkaasi, Uhurru Kenyatti ayaa xaalladda ka sii daray, wuxuuna u muuqdaa Siyaasi aan Aragti Fog lahayn oo u dhaqmaya sidii qof Indho-ku-garaadle oo kale.
Diplomaasiyiinta ayaan jeclaysanin hadalka William Rutto, waxayna baaqiisa ku tilmaameen Aragti isaga u gaar ah William Rutto, maadaama aysan Dowladda Kenya si rasmi ahaan ugu wargelinin QM iyo Dowladda Somalia go’aanka ay ku doonayaan in lagu soo raro Qaxootiga Soomaalida ee ku nool Xeradda Dhadhaab.
Gurxanka iyo hadalladda aan loo maydaan dayin ee ay Madaxdaa Kenya joogteysteen ayaa waxay sii laba lixaadsadeen, kadib, markii ay Dagaalamayaasha Alshabaab bishan April 2-dii weerareen Jaamacadda Garissa, laguna dilay in ku-dhow 150-qof oo u badan Ardaydii Jaamacadda.
Weerarkaasi ayaana horseeday Xadgudubyadda ay Madaxda Kenya ku hayaan Muwaadiinta Soomaalida , waxaana hubaal ah inay Dowladda Kenya ku dhiiranayn La-dagaalanka Alshabaab, balse ay u muruq sheeganayaan Birri-ma-geydada, siiba Ganacsatadda iyo Qaxootiga Soomaalida.
Markaynu doc kasta ka eegno, Dabeecadaha Madaxda Kenya ayaa lala barbar dhigi karaa Halqabsiga ah: Kenya u nugulaa cabsida Alshabaab, kana didsanaa Qaxootiga Soomaalida !!!
Dowladda Kenya oo ku gacan-sayrtay Baaqii Alshabaab ee ahaa inay ciiddankooda kala baxaan Somalia
Anonymous gunmen kidnap Somaliland vehicle in Awdal